मिस नेपालमाथि यस्तो प्रश्न उठाइनु हुँदैनथ्यो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
मिस नेपालमाथि यस्तो प्रश्न उठाइनु हुँदैनथ्यो
कतारका नेपालीहरू नेपाल फर्किएर अब नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ (कतार संकट : कस्तो असर पर्ला नेपालीहरूमा ?) । यो एउटा अवसर पनि हो ।
मिस नेपालमाथि यस्तो प्रश्न उठाइनु हुँदैनथ्यो (अन्तर्वार्ता : म शतप्रतिशत नेपाली हुँ) । उनको राष्ट्रियतालाई यति हलुका रूपमा लिनु हुँदैन ।
यति व्यस्त समयमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्रपत्रिका पढ्ने समय पनि कहाँ होला र ? (गजुरियल विश्लेषण : यसरी हुन्छ, शेरबहादुर दाइको कार्यकाल) । गुटबन्दी बन्द गरेर देशको विकासमा लाग्नुपर्‍यो ।
त्यो त मानवीय स्वभाव नै हो (युवा मन : मान्छे हुनुको भाव) । मानिसले आफूलाई एक्लो महसुस गर्छ । अरूलाई चिने पनि आफूलाई चिन्न बाँकी
नै हुन्छ ।
बाटो–घाटो, पुल, पुलेसा बनेर मात्र देशको विकास हुँदैन (यात्रा सन्दर्भ : सरकार आत्मीय छैन) । कला, साहित्य, संस्कृति तथा भाषाको प्रचार–प्रसार एवं प्रवद्र्धन जरुरी छ । कुनै सरकारले यतातिर ध्यान दिएको पाइँदैन । साँच्चिकै नेपालका सरकारहरू आत्मीय छैनन् ।
यस्तो सुविधाले धेरै नै राहत मिलेको छ (मोफसलमा उच्च शिक्षा सबै सुविधा एकै ठाउँमा) । विकट क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई पठन–पाठनमा सहज भएको छ । मोफसलमा यस्तो सुविधा थपिँदै जानुपर्छ ।
भारत जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ (घरमै उच्च शिक्षा) । प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने कलेजहरू धेरैभन्दा धेरै खोलिऊन् जसले धेरैलाई सहज बनाउनेछ ।
गायिका सीमा शाहलाई बधाई छ (विमोचन, प्रिमियर : फूल हुँ म) । तपाईंको म्युजिक भिडियो राम्रो चलोस् ।
यो लेख धेरैलाई उपयोगी हुने खालको लाग्यो (घरमै बसेर लाखौं कमाउनुहोस्) । कतै जागिर नखाई घरमै बसेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । आफूले पढेको विषय तथा सिकेको ज्ञानको सदुपयोग पनि हुन्छ ।
परदेशमा बसेर पनि गीत, संगीतलाई समय खर्चेर नाम कमाएकोमा मनिष ढकालजीलाई बधाई (चर्चामा : अस्ट्रेलियाबाट लोकप्रिय हुँदै एक गायक) । कलिलो उमेरमा उनले प्राप्त गरेको सफलता उल्लेखनीय छ । निरन्तरताको कामना ।
हरेक मानिसमा एउटा न एउटा प्रतिभा हुन्छ । आफूमा भएको क्षमता, खुबी चिन्न सक्नुपर्छ र त्यसका लागि वातावरण पनि हुनुपर्छ ।
काले दाइ गीत जति चर्चित भयो, चलचित्र त्यति लोकप्रिय नहुन सक्छ (काले दाइ नै चलचित्र) । कथा, प्रस्तुति एवं कलाकारहरूको छनौट पनि उत्तिकै राम्रो भए मात्र चलचित्रबाट आशा गर्न सकिन्छ ।
निरन्तरता दिइए कुनै पनि कुरामा असफल भइँदैन (मेरो सेक्रेट : डाक्टर पनि कलाकार बन्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्दैछु) । तर, लोकप्रिय बन्न भने थप मेहनत चाहिन्छ ।
नेताहरूले गर्ने काम कलाकारले गरेर देखाए (धुर्मुस–सुन्तलीको नमुना नेपाल) । यो उदाहरणीय कामका लागि धुर्मुस–सुन्तलीलाई बधाई ।
उपत्यकाबाहिरका कलेजहरू पनि अब्बल दर्जामा असार ४, २०७५